युगसम्बाद साप्ताहिक - असफलताको ढाकछोप गर्न आरोप–प्रत्यारोपको बाढी - यादब देवकोटा
Sunday, 01.26.2020, 11:48pm (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 06.18.2012, 04:57pm (GMT+5.5)
संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि यसको दोष एकले अर्कोलाई लगाउने क्रम उग्ररुपमा सुरु भएको छ । संविधान बनाउने जिम्मेवारी लिएर चार वर्षदेखि मुलुकमा राइदाइ गरेका प्रमुख भनिने दलका शीर्ष नेताहरूले ऐतिहासिक असफलताको दोषभागी हुँदा पनि कुनै जिम्मेवारीबोध महसुस गरेको देखिंदैन । अझै पनि आआफ्नै स्वार्थमा रुल्मुलिइरहेका छन् । मुलुकलाई निकास दिनेभन्दा सकस दिनेतिरै बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । सहमति र राष्ट्रिय हितका लागि भन्दै सबै पक्ष आआफ्नै धुनमा मस्त देखिएका छन् । मुलुकको निकासका लागि गर्नैपर्ने काम गर्न पटक्कै अग्रसर नभएका नेताहरूले सहमतिको रटानबाट आफ्नो स्वार्थको दुर्गन्ध फैलाइरहेका छन् ।
यतिबेला मुलुकको अवस्था कस्तो छ ? आम जनतामा सोध्ने हो भने अधिकांशको उत्तर एउटै आउँछ– “देश वर्वाद भयो” । योभन्दा फरक खालको उत्तर कहीं कतैबाट पनि आउँदैन । पछिल्लो समय सरकार, राजनीतिक दलका नेता र अन्य पक्षको काम कारबाही र जनअपेक्षाबीच कुनै तालमेल छैन । जनतालाई जे दिन्छु भनिएको थियो त्यो पाइएको छैन भने जे नहुनुपर्ने हो त्यही–त्यही मात्र भैरहेको छ । डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति सुरक्षा, सुशासन, राहतका अतिरिक्त शान्ति र संविधान दिन नसके एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्दिन भन्नुभएको थियो । आज उहाँभन्दा सत्तालोलुप नेता अर्को देखिएको छैन । परिस्थितिले त्यस्तै अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । आम सहमतिका आधारमा राजनीतिक गतिविधि चलाउनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा अहंकार र दम्भमिश्रित धारणाले सरकार चलिरहेको छ । सरकारमा बस्नेहरू सरकारले राम्रो काम गरेको, तर अझै राम्रो काम गर्न नसकेको तथा जनअपेक्षा धेरै भएको हुनाले केही गरेको जस्तो नदेखिएको बताइरहेका छन् । कतिपय चाहिं विपक्षीले सहयोग नगरेको, कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्दै आफ्नो कमजोरी लुकाइरहेका छन् । सरकार चलाउनेले कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भनेर रोदन गर्नु कतिसम्म उचित हो ? खोज्नुपर्ने उत्तर यसैको हो । केही दिन पहिले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूमा अपेक्षा अनुसारको काम नभएको गुनासो गर्नुभो । त्यो जिम्मेवारी कसको हो ? तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कार्बाही गर्ने हिम्मत किन नगरेको ? तर राजनीतिक नेतृत्व मनोगत भयले त्रस्त छन् । समस्या समाधानमा आ–आफ्नै किसिमका अवरोधहरू आइरहेका छन् र यसको निराकरण गर्ने दायित्व लिएकाहरू गम्भीर हुन सकेको पाइँदैन ।
नेपाली जनताको दिगो शान्तिको चाहना गरेका थिए । जनमुखी संविधानको परिकल्पनाद्वारा मुलुक समुन्नत हुने स्वर्णिम आशा जागृत गरेर बसेका थिए । तर यी सबै पानीमा बगेर गयो । यसको कारण भनेको सत्ता स्वार्थ र दलीय आग्रह प्रवाह नै हो । राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई दलीय स्वार्थको जलपले छोपेर अघि बढ्दा मुलुक दिन प्रतिदिन दलदलमा भास्सिदो छ । राजनीतिक दलहरूबीच जुनरुपमा सहमति र सहकार्य हुनुपथ्र्यो त्यो पटक्कै हुन सकेको छैन । सहमतिका नाममा आ–आफ्नो आग्रहलाई मलजल गर्ने बाहेक कुनै काम भएनन् । मुलुकको एकमात्र गन्तव्य जनमुखी संविधान निर्माण गर्ने थियो तर त्यस दिशातर्फ कुनै प्रगति भएन र अन्ततः संविधानसभाले मृत्युवरण गर्नुप¥यो ।
यी तमाम विषयहरू मुलुक र मुलुकबासीसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष हुन् । देश र जनताको हितका लागि कोही पनि इमान्दार भएर अघि नबढेको परिणाम आजको अवस्था हो । यसमा सुधार नहुने हो भने मुलुक दुर्घटनाको शिकार हुनुको विकल्प नै छैन । मुलुकलाई सही दिशामा अग्रसर गराउन विगतका गल्तीको आत्मसमीक्षा आवश्यक छ तर त्यो सम्भावना धेरै टाढा पुगिसकेको देखिन्छ । मञ्चहरूमा भाषण गर्ने बेलामा सहमतिको राग अलाप्दै विमतिको झुसिलो डकार मात्र बाहिर निस्किरहेको छ । अहिले मुलुकमा सवैले आ–आफ्नो आत्म परीक्षण गरेर स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
ऐतिहासिक संविधानसभा विघटन भयो । यसको दोषभागी को को हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ तर नेताहरू अरुतिरै औंलो तेस्र्याइरहेका छन् । यो उनीहरूको लाज ढाक्ने उपक्रम मात्र हो । नेपाली जनताले बुझेका छन् संविधानसभा भंग हुनुमा कुनै एक पक्षको मात्र दोष छैन । संविधानसभालाई भेडीगोठ बनाउने प्रमुख भनिने दलका शीर्ष नेताहरू नै यसको प्रमुख जिम्मेवार हुन् । अर्कोतिर जनताको मत पाएर संविधानसभामा आएकाहरूले आफूहरूको दायित्व निर्वाह नगर्नु पनि कम दोषपूर्ण कार्य हैन । तर उनीहरूले जस्तो निर्देशन पाए त्यस्तै गरे । अपवादका रुपमा छाडेर भन्ने हो भने अधिकांश सभासद्हरूले दलका नेताको निर्णयमा ताली बजाउने बाहेक केही काम गरेनन् । संविधानसभालाई सुचारु गर्ने सभाध्यक्षले पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको आदेशपालकको भूमिका मात्र निर्वाह गर्नुभयो । सहमतिको नाममा चार वर्षको ऊर्जा, समय र सम्पत्ति खेर गयो । यो सब राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशाले गरिएको थियो वा संविधानसभालाई नियोजित रुपमा मृत्युवरण गराउने खेल थियो त्यो भावी दिनमा खुलस्त होलान् र अहिले सतहमा देखिएका कुराहरूलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने विगतको गल्तीको आत्मसमीक्षा गरेर नयाँ ढंगले सहमति गर्नुको विकल्प छैन ।
कोही पनि कुनै पनि विषयमा परिपक्व र पूर्ण हुँदैन । गल्ती र कमजोरी सवैमा हुन्छ र गर्छन् पनि । तर त्यो गल्तीबाट सिक्ने र कमजोरी सच्याउने प्रयास भने हुनुपर्छ । नेपालमा सर्वाधिक अभाव भएको कुरा नै गल्ती सच्याउने र कमजोरी सुधार्ने चरित्रको हो । नेताहरू कसैमा पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने चेतना जागृत छैन । उनीहरूमा अहंकार प्रदर्शन गर्ने र हुँकार गरेर आँधीबेहेरी नै ल्याउँला जस्तो गरी कोलाहाल मच्चाउने सामथ्र्य मात्र देखिएको छ । नयाँ सिर्जना गर्ने क्षमता कसैमा छैन । त्यसैले अझै पनि समय बितिसकेको छैन । सुधार गरे अझै सुध्रेर जाने अवस्था छ । नेताहरूले आफूले आफैंको आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आइसकेको छ । यस मामिलामा सत्ताको नेतृत्व गरेको एनेकपा माओवादीले अझ बढी विचार पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।
असार १ गते शुक्रबारको आमसभामा प्रधानमन्त्रीले संविधान बनाउन नसकेकोमा जनतासंग माफी माग्नुभो । त्यो उहाँको कुरा हो । तर त्यही कुरा अरुले बोल्न सकेनन् । संविधान सरकारले बनाउने नै हैन । संविधान त संविधानसभाले बनाउने थियो तर नेपालमा भने त्यो जिम्मेवारी चार दलका केही नेताले लिएका थिए । उनीहरूले अहिलेसम्म काम गर्न नसकेकोमा पछुतो मानेका छैनन् । किनभने यसैलाई भजाएर सत्ता प्राप्ति गर्ने लालचा उनीहरूमा छ र अहिले त्यही खेल चलिरहेको छ ।
यतिबेला मुलुक कसरी चलेको छ भन्ने हो भने ‘पशुपतिनाथको कृपाले’ भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको यति लामो समय वितिसक्दा पनि उजाडिएका गाउँबस्तीहरू हराभरा हुन सकेनन् । विग्रेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेन । मुलुकभित्रै पसिना चुहाउनुपर्नेहरू विदेश जान बाध्य छन् । जनताले राहत पाउने आशा नै गर्न छाडिसके । बजार अनियन्त्रित रुपमा खुल्लम्खुल्ला कालो बजारीमा चलेको छ । सरकार, राजनीतिक दलहरूले आफूहरूलाई जनअपेक्षा अनुरुप द्रुतगतिमा अगाडि बढाएका देखिंदैनन् । अहिले त केवल एकले अर्कोलाई ‘काउण्टर’ दिनका लागि मात्र अनेक धारणा प्रवाह गर्ने गरिएको छ । त्यसैले प्रश्न उठेको छ– जनताले चाहेको के पाएँ ? अहिले जनता भन्न थालेका छन्– ‘हिजो एउटा राजा थिए आज त कति हो कति राजा पनि’ ! सवैलाई आफैं ठूलो हुनुपर्ने । कसैलाई आफूले राजतन्त्र मिल्काउन सवभन्दा धेरै भूमिका खेलेको भन्ने घमण्ड, कसैलाई प्रजातन्त्रवादी हुनुको घमण्ड, कसैलाई मध्यस्थकर्ता हुनुको घमण्ड ... सवैको आ–आफ्नै घमण्डले मुलुक पिल्सिइरहेको छ । अहिले जनताले राजनीतिक रुपमा भाषणवाजीमा लोकतन्त्र पाए, उदारता पाए, शान्ति पनि पाए र स्थिरता पनि पाए तर व्यवहारमा यी केही पनि पाएनन् ।
जनताको चाहना शासकहरूको परिवर्तन मात्र हैन, दैनिक जीवनयापनमा सहजता, शान्ति सुरक्षा, विधिको शासन स्थापना तथा न्याय र समानता पनि हो । तर, शक्तिमा पुगेका कसैले पनि जनताको आकांक्षा पूर्तिगर्न सकेका छैनन् । विगत पाँच वर्षदेखिको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भैसकेको छ । आ–आफ्ना अहंकार त्यागेर मुलुकको वृहत्तर हितका लागि प्रतिवद्ध हुने प्रण गर्नु आवश्यक छ । मुलुकले अब एउटा नयाँ दिशाको अपेक्षा गरेको छ । गल्तीबाट पाठ सिक्ने र कमजोरी सुधार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने हो भने अहिले देखिएका धेरै विकृति, विसंगतिहरू निर्मुल गर्न सकिन्छ । यसका लागि गल्ती र कमजोरीहरू नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु आवश्यक छ । जनतामा निराशा उत्पन्न भयो भने त्यसको ज्वालाले अनपेक्षित परिणाम पनि ल्याउन सक्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । मुलुकमा अभूतपूर्व रुपमा राजनीतिक परिवर्तन भएको धेरै भएको छैन । यति चाँडै इतिहास बिर्सने प्रयास भयो भने त्योभन्दा अर्को दुर्भाग्य केही हुने छैन ।
हिजोसम्म जे भयो, जे गरियो त्यसलाई एकातिर पन्छाएर मडारिइरहेका विमतिलाई सहमतिमा लैजानु अहिलेको एकमात्र विकल्प हो । मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा फसिसकेको छ । यस्तोमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र एकताको चिन्ता समेत जागृत हुन थालेको छ । मुलुकलाई अखण्डित राख्न र राष्ट्रिय अस्मिता बचाउनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई अग्रसर गराउनका लागि सहमतीय संस्कारलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । अबको सहमति विगतको जस्तो आफ्नो पक्षको हितका लागि मात्र नभएर मुलुकको हितका लागि हुनुपर्दछ ।